IGUMBI ELIPHAKAMILEYO LITHULE
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDennis
Igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela labucala kwi-3,400 sq ft ekhaya malunga ne-1 1/2 yeehektare kwindawo entle, ekhuseleke kakhulu kwaye ezolileyo. Ifakwe kwimbali kwaye intle kakhulu iChester County. Imalunga neekhilomitha ezingama-35 ukusuka kwiSixeko esiPhakathi kwaye ikulungele ukuhamba ngobuninzi
Yonwabela i-master suite yabucala epheleleyo kunye nokuhamba kwikhabhathi, igumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa kunye ne-whirlpool tub eyahlukileyo. Igumbi lifakwe ibhedi, i-dresser, izipili, kunye neendawo zokulala.
Ikhaya likwindawo ezolileyo kakhulu, ekhuselekileyo kunye nebukekayo yaseBarton Meadows. Kufuphi neepaki, iifama, imisinga kunye neebhulorho ezigqunyiweyo.
IBarton Meadows ime ngokukodwa malunga ne-1/2 phakathi kwePhiladelphia neLancaster. Ke ukuba unqwenela ukuchitha ixesha elithile kwilizwe lama-Amish kwaye wenze isampulu ye-shoo fly pie, nayo inokugwetywa!
Iindwendwe ziza kwabelana nam ngendlu kwaye ndiza kufikeleleka ubusuku nemini.